Ubhalele imbokodo incwadi | IOL Isolezwe
Ubhalele imbokodo incwadi
Isolezwe / 23 August 2012, 2:23pm /
USOLA ababhali ngokuthathela izinto phansi ngokungaphumeleli kwezincwadi zabo umbhali osemncane osanda kwethula incwadi ekhuthaza abesifazane.
Ngesikhathi incwadi yakhe yokuqala ingahambi kahle kwakubukeka sengathi akukho okuzolunga kuNksz Mbali Xulu (32) osanda kwethula incwadi yakhe entsha ethi Undying Spirit of a Woman 2.
Le ncwadi azoyethula ngokusemthethweni maduze uzimisele ngokuthi yenze ngendlela ehlukile kule enye. Uthe ufunde lukhulu ekungahambini kahle kwencwadi yakhe yokuqala.
“Ngike ngibone ukuthi ukube ngenza zonke izinto ezifanele ngabe incwadi yami yadayisa kahle. Nganikela okukhulu ngempumelelo yayo kubantu engangisebenza nabo ngoba ngangizitshela ukuthi yibo okufanele bangisize ekutheni idayise,” kusho uNksz Xulu.
Uthe leli yiphutha elenziwa ngababhali abaningi abasuke beqala ukubhala.
“Ababhali abaningi abakunakekeli ukusabalalisa umsebenzi wabo kwezinye izindawo. Uthola umuntu elinde ukuthi kube nabantu abatshela abanye ngomsebenzi wakhe kepha yena ahluleke ukuzenzela lokho. Mina angizange ngiyifake nasezitolo incwadi yami ngoba ngangingazi ukuthi ngingenze njani,” kusho lo mbhali.
Kulokhu uzimisele ngokwenza okuhlukile mayelana nokusabalalisa ulwazi ngencwadi yakhe ngoba useqalile ukuzimbandakanya nabenza imicimbi yokuhaya izinkondlo okuyinto angayenzanga ngesikhathi ethula incwadi yokuqala.
Incwadi yakhe yokuqala yayikhuluma kakhulu ngezimpi abesifazane abahekene nazo kanti nakule akaphumanga kuleso sifundo.
Kuleya ncwadi wayekhuluma kakhulu ngezinto adlule kuzo njengomuntu wesifazane.
Ifana nesifundiso lapho athatha khona ithuba lokukhuluma nabesimame ngezinto ezifana nokubekezela uma befuna ukuphumelela kulokho abafuna ukukwenza.
“Injongo yami ukuthi abesifazane bafunde lukhulu kulokhu kwengikubhalayo. Ngifuna wonke umuntu wesimame ofunda le ncwadi akwazi ukuthola ithuba lokubona izinto ezingezinhle abanye abantu besimame abadlule kuzo. Kepha khona lapho kumele bazi ukuthi bangakwazi ukuqhubekela phambili yize sebedlule kuzo. Okubalulekile ukuthi bazibuke njengezimo ezingabakhulisa,” kusho uNksz Xulu.
Uthe okumkhuthaze ukuthi abhale enye incwadi emuva kokuhluleka kweyokuqala kube ngamazwi enkondlo yakhe ethi I refuse to give okuyiwo amnika amandla nethemba lokuqhubekela phambili.
UNksz Xulu osebenza njengomcwaningi mabhuku kwaSouth African Revenue Services uthe ukubhala kwakuvele kusenhliziyweni yakhe kepha esaba ukuthi abazali bakhe ngeke bakuvumele ukuthi akufundele. Kepha uthe uma enye yezingane zakhe ezintathu ingathi ifuna ukufundela ukubhala noma ifuna ukuba ngumbhali angayeseka kuze kube sekugcineni.
“Okubalulekile kimi ukuthi benze umsebenzi ozobajabulisa, hhayi abazowenza ngoba befuna ukwenza imali eningi. Kanti futhi ukuba umbhali akusho ukuthi uzohlupheka,” kusho uNksz Xulu.